uhteik: May 2008
ဒီကနေ့ဟာ မိခင်များနေ့ ( mother day) ဖြစ်ပါတယ်။
သား၊ သမီးများ သဘာဝဘေးဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရသော မိခင်များ၊
မိခင် ဆုံးရှုံးသွားသော သား၊ သမီးများ
မိခင်များနေ့မှာ ၀မ်းနည်းမိပါကြောင်းသာ ဆိုပါရစေတော့ . . .
Posted by Unknown အချိန် 9:40 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
နာဂစ်မုနတိုင်းဒဏ်ခံရသူများအတွက် အလှူခံယူများ မန္တလေးမှာ များပြား
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူများအတွက် ကူညီလှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်ရန် မန္တလေးမြို့အတွင်း
မန္တလေးတိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူများက ဦးစီး အလှူခံရရှိရာ သိန်းလေးထောင်ကျော် ရရှိတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။
ဓမ္မစေတီဆရာတော်ကလည်း ကား၁၀စီးကျော်ရရှိတယ်လို့ ကြားရသလို
ဆရာတော်များက လှူဒါန်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
စိတ္တသုခ၊ မေတ္တာမြေ တို့ကလည်း နှိုးဆော်မှုများ ဆောင်ရွက်နေသလို
မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားလူငယ်များကလည်း အလှူခံနေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
နေရာအနှံ့မှာ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူများအတွက် လှူဒါန်းရန် ဆောင်ရွက်နေကြတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် အထူးဝမ်းသာမိပါတယ်။
BANGKOK - The United Nations warned Friday that another storm was headed in the direction of Myanmar, which could complicate the slow-moving relief efforts from deadly Cyclone Nargis.
"Our meteorological people tell us there's likely to be fairly strong rainfall in the next seven days," he told AFP in neighbouring Thailand.
"That's going to beabig issue with unpaved roads. Heavy rainfall could complicate things for all those people going without shelter," Horsey said.
"If there's an epidemic of water-borne disease andalack of shelter whenastorm comes in ... if we have another storm coming into the delta, that's going to beasignificant concern for all those people without shelter."
The country's military, which has run Myanmar with an iron fist for almost halfacentury, said earlier that it welcomed shipments of supplies but was "not ready" to let in foreign aid workers, including disaster experts.
"If we don't get this relief effort up to full scale quickly, there's significant risk ofasecond round of this disaster which could potentially kill as many people as the initial cyclone," Horsey said. - AFP/ir
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မုန်တိုင်းသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောနေကြတာပါ
မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ဘက်မှာ ဗဟိုပြုပြီး
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အရှေ့မြောက်ကို ဗဟိုပြုနေပါတယ်
အခု အပြောအရ နောက်ဆက်တွဲ မုန်တိုင်းဆိုတာ လောလောဆယ်ဆယ်
မိုးလေ၀သ အင်တာနက် ဆိုဒ်များမှာ ရှာဖွေမတွေ့ရှိရပဲ
လူများကို ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်စေတဲ့ သတင်းသာဖြစ်ကြောင်း
ဒုက္ခတွေ့နေသူများကို မကူညီပဲ ဒီလို ကောလာဟလများဖြန့်ချိမှုများကတော့
မြေပုံများနှင့်တကွ သေသေချာချာ ပြကြဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ လင့်ကတော့ ဟောဒီမှာပါ
သြော် တိုက်မယ့် မုန်တိုင်းနာမယ်ကအစ ABC မဟုတ်ပါ
ပြည်သူများခံစားရသည့် သဘာဝဘေးဒဏ် နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး
ပြည်သူများ ကြောက်လန့်ဖို့ သက်သက်နဲ့သော်လည်းကောင်း
အခြား နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး စသည်ဖြင့် အမြတ်ထုတ်လိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း
ကောလာဟလလွှင့်ခြင်း၊ ပြည်သူများကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်
လုပ်ကြသူများအား လုံးဝ ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက် ရှုတ်ချပါကြောင်း။
Posted by Unknown အချိန် 10:56 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
မုန်တိုင်းလာမယ် ဆိုတဲ့ သတင်း ယခုအထိ မဟုတ်နိုင်ပါ
ဂျီတော့ထဲမှာ မုန်တိုင်းထပ်မံဝင်ရောက်မယ်လို့ ပြောနေကြပါတယ်။
အေဘီစီ အမည်ရှိတဲ့ မုန်တိုင်းဝင်မယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်
လိုက်ရှာကြည့်ရသမျှ တော့ မတွေ့သေးပါ။
ကျွန်တော်တွေ့တာတော့ အောက်က လင့်က မုန်တိုင်းကို တွေ့ပါတယ်
နာဂစ်မုန်တိုင်း သေဆုံး၊ ပျောက်ဆုံး စာရင်း(၇-၅-၂၀၀၈)
မေ၇ရက် ညနေ ၅နာရီအချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ
သေဆုံး ၂၂၉၈၀ ဦး
ဒဏ်ရာရ ၁၃၈၃ ဦး
ပျောက်ဆုံး ၄၂၁၁၉ ဦး ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှ သိရသည်။
Posted by Unknown အချိန် 10:15 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
အများအတွက် အလှူဒါနများ ပြုလုပ်သူများသို့
အများအတွက် အလှူဒါနများ ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲများကို
ကျွန်တော်တို့ မြစ်ငယ်ရေဘေးအတွက် သွားရောက်လှူဒါန်းစဉ်က ကြုံရတဲ့အခြေအနေများကို မူတည်လို့ ပြောပြချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က အလှူလုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ထိလက်ရောက်၊ ကိုယ်တိုင်ကိုင်ကျသွားရောက်လှူဒါန်းရမှ ကျေနပ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြစ်ငယ်ရေဘေးလှူဒါန်းရာ ကိုယ်တိုင်ပေးဝေခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပထမဦးစွာ မြစ်ငယ်ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းက တာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီး
ဒုက္ခရောက်သူဦးရေ၊ အိမ်ထောင်စုပေါင်း၊ ကျေးရွာအလိုက်စာရင်းများစသည်ဖြင့်
အဲလိုစုံစမ်းပြီး ရေဘေးခံစားရသူများထံ တိုက်ရိုက်ပေးဝေခွင့်ရဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူများကလည်း အားလုံးလိုက်ပြီး ကူညီပေးကြပါတယ်။
ဘေးဒုက္ခခံစားရသူများရဲ့ အရေအတွက်အတိအကျသည် တာဝန်ရှိသူများထံတွင်သာရှိပါတယ်။
မိမိသဘောနဲ့မိမိ ရပ်ရွာများအတွင်း ၀င်ရောက်လှူဒါန်းရာမှာ မရှိသေးတဲ့ နေရာကို မလှူမိဘဲ
နေရာထပ်ပြီး လှူဒါန်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် တချို့ ရွာမှာ အကြိမ်ကြိမ်ရပြီး အချို့ရွာမှာ မရကြောင်းကို ရွာသူ၊ရွာသားများက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပထမလုပ်သင့်တာကတော့ ကယ်ဆယ်ရေး တာဝန်ရှိသူများကို ကယ်ဆယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ လူဦးရေ၊ အိမ်ထောင်စု စာရင်းကို တောင်းယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ပေးတဲ့ စာရင်းအရ ကိုယ်က လှူဒါန်းနိုင်တဲ့ အရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ရပါမယ်။
မြစ်ငယ်ရေဘေးမှာ ကျွန်တော်တို့လှူရာမှာ လူဦးရေအရ လူတစ်ဦးကို ဆန်နို့ဆီဗူးလေးလုံးနှုန်းနဲ့
လူဦးရေ ဘယ်လောက်စာ လှူဒါန်းမယ်ဆိုတာ တွက်ခဲ့ပါတယ်။
နောက် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းက ပေးတဲ့ ကျေးရွာများမှာ ကျွန်တော်တို့ နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် ကျေးရွာများကို ရွေးချယ်ပါတယ်။
လှူဒါန်းရမယ့်နေရာကို သွားကြည့်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်လိုအပ်မှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပြီး လှူရန်သင့်ပါက တာဝန်ရှိသူများကိုပြောပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူများက လူစုပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုဝင်ဟုတ်မဟုတ်စိစစ်ပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပေးဝေပါတယ်။
ဒါက ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းပါ။
အခု နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသူများကို ကိုယ်တိုင်လှူဒါန်းမယ်ဆိုရင် ဒီလိုလုပ်ပါ့လားလို့ အကြံပေးပါရစေ
၁။ တာဝန်ရှိသူများထံ တရားဝင်ဆက်သွယ်ပါ
၂။ လှူဒါန်းရမယ့်သူ အရေအတွက် တောင်းပါ
၃။ ကိုယ်လှူဒါန်းနိုင်မယ့်အရေအတွက်ကို ချိန်ဆပါ
၄။ တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာဟုတ်မဟုတ် ကွင်းဆင်းကြည့်ပါ
၅။ တာဝန်ရှိသူများကို အကြောင်းကြားအသိပေးပြီး သွားရောက်ဝေငှပါ။
(တာဝန်ရှိသူများထံ ပစ္စည်းအပ်ဖို့ မလိုပါ) ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဝေငှပါ။
၆။ ကယ်ဆယ်မှုရောက်ရှိပြီးသားနေရာများကို ရှောင်ပြီး မရောက်သေးတဲ့နေရာကို ကြိုးစားရှာဖွေပါ။
၁။ တာဝန်ရှိသူများနဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်စရာမရှိပါ။
၂။ တာဝန်ရှိသူများကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြည့်ခြင်းဖြင့် သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲ၊ ရပ်ရွာအခြေအနေကို သိရပါမယ်။
၃။ ကူညီရေးအတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာများ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
(ကျွန်တော်တို့ သွားလှူရာမှာ ကြားခဲ့ရတာက ဒုက္ခရောက်သူများက စနစ်တကျမရှိဘဲ ၀ိုင်းယူကြလို့ များများရတဲ့နေရာကရ
မရတဲ့နေရာကမရ အဲလို မဖြစ်စေချင်လို့ပါ)
၄။ လူဦးရေ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်းစတဲ့ စာရင်းများအတိအကျရလို့ ပစ္စည်းဝယ်ယူရာမှာ တိတိကျကျ စီစဉ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သွားရောက်လှူဒါန်းမယ်ဆိုရင် အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး တာဝန်ရှိသူများနှင့်ဆက်သွယ်ကြည့်ကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
အခြေအနေအရ တာဝန်ရှိသူများက ရိုင်းရိုင်းပြပြဆက်ဆံလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တိုင်လှူခွင့်မပေးဘဲ သူတို့ဆီပဲ ထားခဲ့ရမယ်ဆိုရင် ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဆက်လက်ကြိုးစားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူများကလည်း လိုလိုလားလား ပူးပေါင်းကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
လှူဒါန်းလိုသူများ စိတ်လက်ပျော်ရွှင်စွာ လှူဒါန်းနိုင်ကြပါစေဗျာ
Posted by Unknown အချိန် 10:13 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
စိတ္တသုခပရဟိတလူငယ်များ၏ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံစားရသူများအတွက် လှူဒါန်းမှုအစီအစဉ်များ
Posted by Unknown အချိန် 10:22 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
နာဂစ်မုန်တိုင်း သေဆုံးပျောက်ဆုံးမှု ထုတ်ပြန်ချက်(၆-၅-၂၀၀၈)
မေ ၆ ရက် မွန်းတည့် ၁၂နာရီအထိ ရရှိသော စာရင်းများအရ နိုင်ငံပိုင်
သေဆုံး ၂၁၇၉၃ ဦး
ပျောက်ဆုံး ၄၀၆၉၅ ဦး
သေဆုံး ၆၇၁ ဦး
ပျောက်ဆုံး ၆၇၀ ဦး
မုန်တိုင်းဒဏ်ရသော ဒေသအားလုံး စုစုပေါင်း
သေဆုံး ၂၂၄၆၄ ဦး
ဒဏ်ရာရ ၆၇၀ ဦး
ပျောက်ဆုံး ၄၁၀၅၄ ဦး
ဒီလောက်ထိခိုက်မှု ပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့် အခြား ပျက်စီးများမှာ မရေတွက်နိုင်အောင်
လေဘေးသင့်သူများအတွက် ပါဝင်လှူဒါန်းကြဖို့ နှိုးဆော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
လှူဒါန်းလိုပါက မိမိတို့ ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်း
ဒါမှမဟုတ်လဲ မိမိတို့ အစီအစဉ်များဖြင့် တိုက်ရိုက် သွားရောက် လှူဒါန်းပေးကြဖို့
တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမ အချင်းချင်း သုခ၊ ဒုက္ခကို
မျှဝေခံစားကြရအောင်ဗျာ . . .
Posted by Unknown အချိန် 8:01 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် မန္တလေးက ထိခိုက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး . . .
ကုန်ဈေးနှုန်းအချို့ တက်ခြင်းက လွဲပြီး ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းသိပ်မရှိပါဘူး
ဒီရက်ပိုင်းမှာ တိမ်ထူထပ်ပြီး ပူတာကတော့ ပူမြဲပါပဲ . . .
ကောလာဟလအဖြစ်ကတော့ ငလျင်လှုပ်မယ်ဘာညာ ဘာညာ ပြောနေကြသော်လည်း
မုန်တိုင်းကြောင့် ငလျင်လှုပ်မည်ဟု မကြားဖူးပါ ။
အပူလွန်ကဲသောကြောင့် သဘာဝဖောက်ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဖြစ်ခြင်းကြောင့်
ရာသီဥတုပူမြဲ ပူလျက်ရှိရာ အဆိုပါရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရန်သာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ . . .
Posted by Unknown အချိန် 10:21 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
နာဂစ်မုန်တိုင်းခံစားရသူများသို့ သက်ဆိုင်ရာမှလည်း ကူညီမှုများလုပ်ဆောင်နေသကဲ့သို့
မိမိတို့တတ်နိုင်သည့်ဘက်ကလဲ ကူညီလှူဒါန်းမှုများ ဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။
မန္တလေးမှ လေယာဉ်၊ ရထား၊ ကား လမ်းကြောင်းများဖြင့် အကူအညီပစ္စည်းများနေ့စဉ်ပေးပို့လျက်ရှိရာ
ယခုအခါ စိတ္တသုခ ပရဟိတလူငယ်များအနေဖြင့် မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့သို့ ပေးပို့လှူဒါန်းနိုင်ရေး
စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ လှူဒါန်းလိုပါက ပါဝင်ဆက်သွယ် လှူဒါန်နိုင်ပါကြောင်း။
နည်းများမဆို တတ်နိုင်သလောက် အကူအညီပေးလှူဒါန်းခြင်း
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဖြင့် များသူက နည်းသူကို မျှဝေခြင်းဖြင့်
သဘာဝဘေးဒဏ်ကို တွန်းလှန်ဖယ်ရှားကြရအောင်ဗျာ . . .
၂ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှသည် ၃ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြင်းထန်စွာ တိုက်ခိုက်ခံရသည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသည့်
မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းတွင် လူပေါင်း နှစ်သောင်းကျော် သေကြေပျောက်ဆုံးပြီး
လူထောင်ပေါင်းများစွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ လူပေါင်းများစွာ အိုးအိမ်ပျက်စီးခဲ့ရပြီး
အိမ်ထောင်စု ထောင်ပေါင်းများစွာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
လူသားပေါင်းများစွာ မိခင်၊ ဖခင်၊ သား၊ သမီး၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများ ဆုံးရှုံးပြီး
ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးများစွာအတွက် ထိုသူများနှင့်ထပ်တူ ထပ်မျှ ၀မ်းနဲကြေကွဲကာ
Posted by Unknown အချိန် 10:10 PM No comments: ဦးထိပ် အတွေးနဲ့အရေး
နာဂစ်မုနတိုင်းဒဏ်ခံရသူများအတွက် အလှူခံယူများ မန္တလေ...
UN warns another storm headed toward Myanmar Post...
နာဂစ်မုန်တိုင်း သေဆုံး၊ ပျောက်ဆုံး စာရင်း(၇-၅-၂၀၀၈...
နာဂစ်မုန်တိုင်း သေဆုံးပျောက်ဆုံးမှု ထုတ်ပြန်ချက်(၆-...